Ampitomboy ny orinasanao fitantanana fananan-tany miaraka amin'ny tapakila tsara indrindra
Famatsiana solosaina ny fanentanana amin'ny varotra amin'ny alàlan'ny famoronana sy fanolorana tapakila ho an'ireo vahininao mahatoky, ny vinavinanao sns.
Matetika ireo mpampiantrano dia mahita ny tenany amin'ny toerana te-hanolotra voucher ho an'ny vahiny noho ny antony maro. Ny voucher dia toy ny tapakila manamarina ny fizotran'ny famandrihana mandritra ny fotoana hafa. Izy ireo koa dia azo raisina ho toy ny fanomezana azon'ny tompon-trano atolotra na fanomezana ho an'ny vahininy. Ny fampiasana voucher dia tena mahasoa amin'ny fitazonana ny fifandraisan'ny mpanjifa tsara ary koa ny fihazonana ny vola miditra - mora raisina na ho an'ny tompona trano na ho an'ny vahiny.
Raha mampiasa an'io endri-javatra io ianao hanamafisana ny famandrihan'ny vahininao, ireo voucher ireo dia mamela ny mpanjifanao hanao antoka fa vita sy voamarina ny fizotran'ny famandrihana. Azon'ireo vahiny atao koa ny mijery ny mombamomba azy ireo raha toa ka nampiditra tsara ny fampahalalana rehetra izy ireo. Afaka manana ny taratasin'izy ireo miaraka aminy mandritra ny fotoana ijanonany koa izy ireo raha mila fampahalalana mora.
Amin'ny maha-tompona trano anao dia efa niatrika olana ara-barotra tokoa ianao. Raha vaovao amin'ny orinasa ianao ary vao nanomboka ny tranokala famandrihana mivantana, azonao atao ny mampiasa karazan-tsivana samihafa hahazoana mpanjifa bebe kokoa. Misy fotoana voafetra amin'ny taona fa vitsy ny mpanjifanao. Ka ny fampiasana ny endri-tsoratra momba ny tapakila manampy anao amin'ny varotra sy ny tolotra dia hahasarika vahiny bebe kokoa mandritra ny vanim-potoana ambany ary hanampy betsaka amin'ny fitohizan'ny famandrihana.
Mandritra ny toe-javatra manokana toy ny areti-mandringana Covid-19 izay iainantsika, ny fampiasana voucher dia mety safidy lehibe. Miorina amin'ny paikadim-barotra sy fampiroboroboana nataonao dia tsy maintsy ananana io fampiasa io. Ohatra, azonao atao ny manolotra ny mpanjifanao mahatoky, fihenam-bidy, hanome toky azy ireo momba ny protokolola mandritra ny areti-mandringana. Noho izany, afaka manana ny dia ataon'izy ireo izy ireo, fitsidihana fanabeazana, fianakaviana ilaina na karazana dia lavitra ilaina ary mijanona ao amin'ny tranonao.
Ny fampiasana voucher dia paikady marketing mailaka tsara, mikendry vahiny manokana ho an'ny vanim-potoana ambany. Amin'ny tranga hafa, ny orinasam-pitantanana fananan-tany dia mety hahazo fitarainana amin'ny mpanjifa iray ary te-hamaha ny olana amin'ny alàlan'ny fanolorana voucher ho fanoloran-tena amin'ny finoana, hiantohana ny fahafaham-pon'ny vahiny. Amin'ny toe-javatra hafa koa, ny mpitantana fananana dia mety hampirisika ny famandrihana miverimberina ary hamoaka izany voucher nomerika hampiasain'ny vahiny rehefa mamandrika mivantana amin'ny alàlan'ny tranonkalany amin'ny ho avy. Raha tsy izany, noho ny fanafoanana ny vahinin'ny mpivahiny na ny olana iray nosedraina nandritra ny fijanonany dia mety haniry ny hanome fihenam-bidy ho an'ny vahiny ireo mpampiantrano ho fihetsika tsara fikasana amin'ny fijanonany manaraka. Matoky ireo vahiny fa niasa tamin'ny fomba matihanina ny orinasa ary amporisihina hiara-hamandrika aminao amin'ny manaraka.
Na dia misy tombony be aza ny rafitra voucher matanjaka, indrisy, maro ny rafitra fitantanana fananana sy milina famandrihana ho an'ny fitantanana ny fanofana fialan-tsasatry ny orinasa no tsy manome fahafaha-mamorona kaody coupon hampiasain'ny vahiny.
Ahoana no ahafahan'ny Voucher an'i Zeevou manampy?
Mba hanampiana anao hiatrika ny olana natsangana tao Zeevou fisondrotana rafitra dia natsangana miaraka amin'ny fahombiazanao ao an-tsaina. Ity rafitra ity dia ahafahanao mamorona fampiroboroboana ankapobeny ho an'izay mitsidika anao tranokala famandrihana mivantana rehefa feno fepetra sasany. Na izany aza, indraindray tsy ampy izany. Na inona na inona ilainao amin'ny rafitry ny voucher dia mahazo ny lamosinao izahay.
Ny famoahana ny voucher vahin'i Zeevou dia mamela anao tsy hamorona kaody voucher fotsiny izay alefa mifototra amin'ny famandrihana manokana na ny datin'ny datin'ny fahatongavana, fa afaka mametra ireo ihany koa mba hampiasana imbetsaka.
Manana safidy maro ianao hanombohana azy, avy hatrany amin'ny boaty. Amin'ny fampiasana ny taratasim-bola Zeevou dia azonao atao ny manitatra ny paikadim-barotrao ary mamorona bebe kokoa amin'ny fisintomana ny mpanjifa. Azonao atao ny manamboatra fehezan-dalàna momba ny voucher ho an'ny vondrona manokana amin'ny vahininao izay nofidinao tamin'ny fomba fijerinao ara-barotra.
Raha te hanana lanjany manokana ianao, dia ampidirina ary mora ny manangana azy. Ny fizotrany dia ataon'ny mpampiasa tanteraka ary hamonjy anao fotoana betsaka. Safidio fotsiny ity fampiasa ity, fenoy ny fampahalalana ilaina amin'ny endrika, ary atombohy ny famoahana ny taratasinao. Amin'izany dia afaka mamolavola fanentanana isan-karazany amin'ny fotoana samihafa ianao ary manolotra fihenam-bidy amin'ny mpanjifa mandritra ny fotoana voafetra. Amin'ny alàlan'ny fifandraisanao amin'ireo vahininao amin'ny fampiasana ireto voucher ireto dia afaka manampy ny marikao ianao ary hahazo ny tsy fivadihan'ny vahiny.
Betsaka ireo Toetoetra misy ao Zeevou izay natao hanampiana anao hitantana ny fanananao tsy misy fihenjanana. Azonao atao foana koa Mifandraisa aminay raha te-hahazo vaovao misimisy kokoa na tsara kokoa, avelao izahay hampiseho aminao - mangataha Demo maimaim-poana amin'izao andro izao!